Oliver Giroud Oo Jawaab Lama Filaan Ah Ka Bixiyay Kooxda Uu Jecel Yahay Arsenal Ama Chelsea & Sabab Caqligal Ah Uu U Yeelay - Laacib
Oliver Giroud Oo Jawaab Lama Filaan Ah Ka Bixiyay Kooxda Uu Jecel Yahay Arsenal Ama Chelsea & Sabab Caqligal Ah Uu U Yeelay
October 14, 2021 Saed Mohamed
Olivier Giroud ayaa qirtay inay ku adkeyd inuu ka tago Chelsea marka loo eego Arsenal ka dib waqti fiican oo guulo ah uu ku qaatay Stamford Bridge laakiin wuxuu shaaca ka qaaday sida uu uga yara xanaaqay qaabkii uu uga tagay Blues.
Weeraryahanka Faransiiska ayaa dhaliyay 39 gool 119 kulan uu u saftay Chelsea isagoo kula guuleystay Champions League, Europa League iyo FA Cup mudadii seddexda sanno iyo bar ee uu joogay Stamford Bridge.
Si kastaba, waxaa waqtigiisa ciyaarista xadiday tababare Thomas Tuchel xilli ciyaareedkii la soo dhaafay iyadoo Timo Werner iyo Kai Havertz ay ka horeeyaan dhanka xulashada, waxayna keentay in xagaagii 3.6 milyan ginni looga iibiyo AC Milan.
Wareysi uu siiyay idaacada Ingariiska ee talkSPORT, Giroud ayaa kala doortay labadii kooxood ee reer London ee uu u soo ciyaaray, isagoo doortay Blues islamarkaana sharaxay sababta uu u dooran waayay Arsenal uu lix xilli ciyaareed la soo qaatay.
“Waxaan Chelsea joogay seddex xilli ciyaareed iyo bar” ayuu Giroud u sheegay talkSPORT.
“Waqti aad u fiican ayaan ku soo qaatay Arsenal laakiin waqtigii Chelsea ayaa iiga sii fiicnaa sababtoo ah waxaan kula guuleystay koobab waa weyn.
“Dareen ahaan waa ay igu adkeyd markii aan ka tagay Montpellier iyo Arsenal, laakiin waxaa iiga sii adkaa Chelsea sababtoo ah ma aanan dheelin seddexdii bilood ee ugu danbeysay sidaasi darteed cadeyn ayay ii aheyd inaan raadsado koox kale.
“Waan ka yara carooday inaan dheelin seddexdii bilood ee ugu danbeysay sababtoo ah waxaan qeyb libaax leh ka qaatay guushii Champions League anigoo noqday xiddiga ugu goolasha badan kooxda.
“Laakiin maxaan oran karaa? Waxaan aheyn kuwa guulo waa weyn gaaraya sidaasi darteed aad ayaan ugu faraxsanahay ku guuleysiga FA Cup, Europa League iyo Champions League. Waxaan dhaliyay goolal muhiim ah.
“Waa ay igu adkeyd inaan ka tago Champions League iyo Premier League laakiin ugu danbeyn waxaan aaminsahay inay aheyd xalka ugu fiican.”